MASOIVOHON’I CHINE : Nanolotra fitaovana mitentina 80 tapitrisa Ariary ho an’ny polisim-pirenena
Nanolotra fampitaovana mitentina 80 tapitrisa ariary ho an’ny polisim-pirenena miasa eto an-drenivohitra ny masoivohon’i Chine miasa sy monina eto amintsika. 18 octobre 2019
Omaly, tetsy amin’ny « Commissariat Central » Tsaralalàna no nanolorana izany. Nandray ireto fitaovana ireto moa ny minisitry ny filaminam-bahoaka, Roger Rafanomezantsoa. Tsiahivina fa efa 47 taona amin’izao no nifandray ara-diplomatika i Madagasikara sy Chine. Niroborobo fatratra ny fiaraha-miasan’ny roa tonta nandritra izany, hoy ny masoivohon’i Chine. Nanampy betsaka ny mpitandro filaminana amin’ny fanolorana fampitaovana tahaka izao hatrany ry zareo Sinoa ary nizara ny traikefany ho an’ny polisy malagasy koa.
Polisy malagasy miisa 10, ohatra, no nomena fiofanana manokana tany Chine ny volana aogositra lasa teo. « Vonona hanome tanana hatrany an’i Madagasikara ny firenena sinoa ary vonona hanohy ny fiaraha-miasa », hoy ny masoivohon’i Chine raha nanolotra ireto fitaovana ireto.
Aroloha, Aron’akanjo tsy laitram-bala, fitiliana alkaola ampiasaina itarafana ny mpamily fiara. Ireo no santionany tamin’ireto fitaovana natolotra ireto. « Mino izahay fa izao fampitaovana izao dia ho fanampiana entina hitondra tombotsoa sy hamamafy ny fahaiza-manaon’izy ireo eo amin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny endriny rehetra, ny famonoana olona ary ny fiarovana ny olona », hoy hatrany ny masoivohon’i Chine. Nankasitraka manokana ity masoivoho ity teto ny Minisitry ny Filaminana anatiny, Rafanomezantsoa Roger.
Nomarihiny fa vonona hatrany ny polisim-pirenena hampiseho ny maha matihanina azy ireo ho fampanjakana ny fandriam-pahalemana sy hiarovana ny vahoaka sy ny fananany. « Hoentina manatevina ny fampandriana fahalemana eto Antananarivo ireo fitaovana ireo, misaotra betsaka azy izahay polisim-pirenena satria talohan’izao dia efa nisy ny fiofanana nomen’izy ireo ny mpitandro filaminana nalefa tany Chine ary mbola narahany fanomezana fitaovana izany », hoy ny nambaran’ny minisitry ny filaminam-bahoaka.